पुडासैनीको भिडियो यसरी बाहिरिएको रहेछ, किशोर श्रेष्ठले खोले यो रहस्य ! – On Khabar
पुडासैनीको भिडियो यसरी बाहिरिएको रहेछ, किशोर श्रेष्ठले खोले यो रहस्य !
August 17, 2019 onkhabarComment(0)
अनखबर / साउन ३२
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि तयार पारेको भिडियो क्लिप्स कसरी सार्वजनिक भएको रहेछ ? यसको रहस्य खुलेको छ । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले उक्त भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
सम्पादक किशोर श्रेष्ठले लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै यसो भनेका छन् :
‘पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान सुस्त देखिएजस्तो लागेपछि परिवारका सदस्यहरु घटनाको सातौं दिन आइतबार साँझ मेरो कार्यालयमा आएर शालिकरामको मरणअघिका दुई Video Clip Share it मार्फत मेरो मोबाइलमा ट्रान्स्फर गर्दै भन्नुभयो, ‘दाइ, तपाईं संकटकालमा पनि नडग्मगाएको मान्छे,। यसको आधारमा समाचार बनाएर खबरदारी गरिदिनु पर्यो । हामीले त्यसरी प्राप्त 8:27 र 4:57 मिनेटका छुट्टाछुट्टै ती क्लिप्सका केही अंश उल्लेख गर्दै बुधबारको दिन ‘पत्रकारले मर्दामर्दै खोलेको पोल’ शीर्षकअन्तर्गत जनआस्थामा समाचार प्रकाशन गर्यौं ।
मेरा स्तम्भकार मित्र संकेत कोइराला ‘नेपाल आज’मा पनि संलग्न भएको र उहाँहरुसमेतले पत्रिकाबाट उक्त खबर धेरैवटा अनलाइनले साभार गरिसकेको हुँदा हामीले पनि पोस्ट गर्न पाउँ न भनी आग्रह गर्नुभएबमोजिम ती Video सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइएको हो । सँसारभरका पत्रकारको पहिलो कर्तव्य प्राप्त प्रमाणित सामग्री अरु कसैले भन्दा पहिले आफ्ना दर्शक र श्रोतासामु प्रस्तुत गर्नु हुने गर्दछ । त्यही कर्तव्य पालना हामीबाट पनि भएको हो तर यसवीच केही मित्रले वास्तविकतै नबुझी, आफूखुसी काल्पनिक कथा छापी स्वार्थसिद्ध गर्न र परिस्थितिलाई अर्कै दिशातर्फ मोड्न चाहेको देखियो ! उक्त Video को कन्टेन्टबारे हाम्रो भन्नु केही छैन । सरोकारवाला निकायले नै अनुसन्धानबाट खुट्याउलान् । हाम्रो भनाइ त यति मात्रै हो कि यस प्रकरणमा बिश्वभरका एक से एक IT बिज्ञहरुलाई झिकाएर त्यति समयभन्दा बढीको video clip छ भने रिकभर या प्रमाणित गरेर देखाए हुन्छ । जब कूल १३ मिनेट २४ सेकेण्डभन्दा लामो video नै खिचिएको छैन भने Edit गरेको या कसैलाई हुने, कसैलाई नहुने गरी प्रकाशन या प्रशारण गरिएको प्रश्नै उठ्दैन !
घामजस्तै छर्लङ्ग वास्तविकता यही हो र यही मात्रै हो । यस प्रकरणमा कोही कसैलाई अनावश्यक मुछ्ने या विषयान्तर गर्ने जरुरतै छैन । हामी जसरी यस मामिलामा टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको निर्दोषिता प्रमाणित होस भन्ने चाहन्छौं, त्यसरी नै श्रमजीवी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले समेत अकाल मरेर पनि अन्याय भोग्न नपरोस भन्ने ठान्दछौँ ।
हामीले अफिसियल रुपमै रविजीलाई पोहोर पनि बिदेशी नागरिकता र राहदानी त्यागेर नेपाली बनी, आफ्नै देशको एक असल Tax Payer का हैसियतले कानूनी रुपमै पत्रकारिता थाल्न बिनम्र आग्रह गरेका video clip हरु थyoutube मा सर्च गर्दा पाउन सक्नुहुन्छ । न हाम्रो पुरानो चिनाजानी, न बिट एउटै, न एकार्काको प्रतिस्पर्धी, न त कुनै दुश्मनी नै । सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हुनेले कहिल्यै पनि आउनोस, मिलिजुली देश र जनताको हित अनुकूल पत्रकारिता गरौं भन्दै यसखाले सुझाव दिँदैन । ३३ बर्षको पत्रकारिता जीवनमा हामीले थुप्रै आरोह–अवरोह झेलेका छौँ र सबै सबै देशबासीप्रति पुनः यो पनि विनम्र आग्रह गर्दछौं कि अनाहकमा कोही, कसैमाथि, कहिल्यै पुस्ट्याई बिनाका आरोप नलगाऊँ । हाम्रो पेशागत कर्म र धर्मबारे केही भ्रम भए या लेख्न मन लागे सीधै सम्पर्क गर्दा हुन्छ । सक्दो जानकारी दिन हर्दम तयार छौँ । हाम्रा कुनै पनि गतिविधि अपारदर्शी छैनन् । अनि हामीले झेलेको बिगत र लगाइएका झूठ आरोपहरु तथ्यको कसीमा लल्याकलुलुक गलेका उदाहरण निकट विगतमै छन् । गल्ती नगर्दासम्म कसैले आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुराका हामी आफै भुक्तभोगी हौं ।
र, हामीले कानूनी प्रक्रियाबाटै आफूमाथिका समुच्च आरोपको न्यायिक निरुपण गरेका छौँ । पुनश्च : video प्रकरणको वास्तविकतालाई आफ्नो निहित स्वार्थबस् तोडमरोड नगर्न र हाम्रो पेशागत आचरण तथा तपाईं हामी आफ्नै लेखनप्रति जनविश्वासको असामयिक अवसान हुन नदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । वस्तुनिष्ठ आलोचना र सिर्जनात्मक सुझावको सधैं सम्मान गर्ने नै छौं ।
February 14, 2019 February 14, 2019 onkhabar
Spread the love अनखबर २ फागुन, काठमाडौं । घुसकाण्डमा मुछिएको भनिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाइने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का नेताहरुले बताएका छन् । भक्तपुरमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादमा लाखौं रुपैयाँ घुस बुझेको भिडियो हेरेपछि नेकपाका नेताहरू पाठकलाई हटाउने निश्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘राजिनामा नदिए शुक्रबार […]
सरकार अलोकप्रिय भएपछि, क–कसको फुस्किदैछ मन्त्री पद !
Spread the love अनखबर ४ पुस – काठमाण्डुमा जारी नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र त्यसले गर्दा जनताको समर्थन गुमिरहेको भन्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको माग गरिएको हो । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजीत पन्तले नेकपामा क्षमतावान मान्छेहरूको अभाव नभएकाले काम गर्न नसक्ने […]
Spread the love मङ्सिर ११, झापा । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–७ लालझोडास्थित गए राति आगलागी हुँदा राति सुतेको अवस्थामा एकै घरका चार जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ३५ वर्षीय लक्ष्मण खनाल, ३० वर्षीया राधिका खनाल, चार वर्षीया चन्द्रा खनाल र चार महीनाको शिशु टीकाराम खनाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद […]
टुङ्गियो नेकपाको विभागिय जिम्मेवारी, स्कुलमा पोख्रेल र उपाध्यक्ष गौतम (निर्णयसहित)
रवि लामिछाने सहितका ३ जना ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश
रवि लामिछाने अदालतमा उपस्थित, हज्जारौं जनता नाराबाजी गर्दै अदालत परिसरमा